Ogaden News Agency (ONA) – Faraca Midnimo ee Xerada Dhadhaab oo Gudoonsiiyay Shahaadooyin ay Mutaysteen Xubna Kamid ah Jaaliyadda
Faraca Midnimo ee Xerada Dhadhaab oo Gudoonsiiyay Shahaadooyin ay Mutaysteen Xubna Kamid ah Jaaliyadda
Waxaa maalintii shalay oo Sabti ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 31/1/15 xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab ka qabsoomay shirkii faraca ee caadiga ahaa. Shirkan oo xubnaha u lahaa muhiimada gooni ah oo ay tabayeen xubnaha faraca midnimo iyo gudiga faracuba ayaa ahaa mid ka duwan kuwii horay faraca loogu qaban jiray waxuuna ahaa kulankii ugu horeeyay ka dib markuu faracu galay fasax yar.
Madasha shirka ayaa aad loosoo buux dhaafiyay waxaana ugu horayn kulankan uu furmay abaare 2:00 duhurnimo xiliga Dhadhaab iyadoo lagu furay wacdi diini ah iyo aayado qur’aanka kariimka ah kamid ah oo uu soo jeediyay fadhilatul sh Cabdinajiib oo xubnihii fadhiyay shirka ku adkeeyay cabsida Allaah isagoo si fiican u xusay in jihaadku waajib yahay iyo waliba balamaha oo lafuliyo.
Intaas kadib waxaa lasii gudagalay ajandayaashii shirka waxaana lagu soo dhaweeyay N/hure Muuse Cismaan oo soo jeediyay warbixin dal iyo dibad ah wuxuuna aad uga warbixiyay tusaale ahaana usoo qaatay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhax mara CWXO iyo kuwa gumaysiga oo guulo lataaban karana ay soo huyiyeen ciidanka xooga dalka Ogadenia.
Intaas kadib waxaa warbixin guud oo dibada iyo arimaha faracyada khusaysa soo jeediyay gudoomiyaha faraca mudane Axmaddaahir Cali oo runtii warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa madasha kasoo jeediyay. Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay Hogaanka arimaha bulshada oo si ay xigmad kujirto usoo gudbiyay kalmado abaabul ah iyo dhiiri galin bulshada ah.
Dhinaca kale gudiga faraca ayaa sooban dhigay waxqabadkii urur hoosaadyada faraca midnimo waxaana laqeexay wax qabadkii urur hoosaadka OYSU ee ka howl gala Dhagaxlay iyo ururka Culima owdiinka iyo waliba urur hoosaadka Hooyooyinka ama haweenka waxaana kaalinta ugu horaysa ee faraca lasiiyay ururka Hooyooyinka waxaana loo raaciyay shahaado iyo amaan kale oo dheeri ah.
Intaas kadib waxaa lagu wareejiyay gudiga garsoorka ee faraca waxayna shahaadooyin siiyeen 12 qof oo loo gartay in ay sameeyeen shaqo wanaag aad ubadan sanadkii tagay waxayna xubnaha shahaadooyinka qaatay ubadnaayeen gabdhaha ree Ogadenia ee faraca katirsan oo shirka laga sheegay in ay muujiyeen dadaal lama ilaawaan ah.
Sikastaba ha ahaatee shirkii faraca midnimo ee manta ayaa ahaa mid aad ay xubnuhu uga soo qayb galeen aadna loosoo qorsheeyay waxaana lagu soo khatimay suugaan iyo afkaarta xubnaha oo sifiican looga dhagaystay xubnaha aragtidooda. Wuxuuna soo xidhmay markay goorsheegtu haahaabanaysay 4:00 galabnimo